विघटन सही साबित गर्ने प्रयास | Nagarik News - Nepal Republic Media
विघटन सही साबित गर्ने प्रयास
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा सरकारी वकिलहरूले विघटनलाई संविधानसम्मत साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकार पक्षका वकिलहरू शुक्रबारको बहसमा पनि संविधानमा नलेखिएका विषयलाई प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्न तल्लीन रहे ।
आवश्यकता र बाध्यताको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो ।’ उनले विभिन्न देशका संविधानको उदाहरण पेस गर्दै अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास भएको बताए । विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अदालतको निरुपणको विषय नहुने जिकिर पनि रेग्मीले गरे । के आधारमा विघटन गरियो ? विघटन आवश्यक थियो कि थिएन ? नयाँ सरकार गठन गर्ने अवस्था थियो कि थिएन ? भन्ने विषय राजनीतिक भएको दाबी उनले लिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘संसदीय व्यवस्थामा जति लेखेका छौं, त्यति मानिएको छ ? २०४७ सालको संविधानमा जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार यो संविधानमा किन नलेखिएको ? संविधानमा नलेखिए पनि विघटन भएका अन्य मुलुक पनि छन् ?’ जबाफमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले उस्तै शब्द नराखिए पनि मिश्रित खालको भाषा भएको बताए ।
‘धारा ७६ को भाषा क्रमबद्ध रुपमा आएको । नियुक्ति हुन नसकेको कसलाई इंगित गरेको ?’ इजलासबाट न्यायाधीश श्रेष्ठले सोधे । विघटनका आधार विभिन्न खालको भएको रेग्मीले बताए । ‘अप्ठेरो अवस्थामा पनि विघटन हुन सक्छ, चुनाव हुन सक्छ श्रीमान्,’ उनले भने ।
‘अतिआशा, अतिनिराशामा विघटन गरिएको हुन्छ । विघटनबाट आफैंलाई पनि दण्ड हुन सक्छ ?’ प्रधान्यायाधीश जबराले सोधे । अदालतले राजनीतिक प्रश्न भन्नुपर्ने रेग्मीले जबाफ दिए । ‘बेलायत र भारतमा एउटा पनि विघटन बदर भएको छैन । विघटनका आधार विभिन्न छन्,’ उनले भने ।
त्यसैगरी अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकनाथ पराजुलीले अन्य दलले पनि विघटन स्विकारिसकेको तर्क गरे । उनले विपक्षी कुनै पनि दलले विघटनविरुद्ध रिट निवेदन लिएर नआएको आधारमा विघटन स्विकारेको दाबी गरे ।
अर्का सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै भूमिका हुने बताउँदै सुनिश्चित नगरिएका अवशिष्ट अधिकार कार्यपालिकाले प्रयोग गर्न पाउने दाबी गरे । उनले राष्ट्रपतिको भूमिकाका विषयमा पनि बहस गरे । प्रतिनिधिसा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नै पर्याप्त भएको र संविधानले राष्ट्रपतिलाई बाँधेको उनले बताए ।
प्रकाशित: २४ माघ २०७७ ०६:३१ शनिबार